Hey’adaha amaanka Galmudug oo soo saaray amarro ka dhan ah hubka aan sharciyeysnayn. – Maanta Online
Hey’adaha amaanka Galmudug oo soo saaray amarro ka dhan ah hubka aan sharciyeysnayn.
Maamulka Galmudug ayaa soo saartay amarro lagu mamnuucayo hubka sharci darada ah ee lagu dhex qaato deegaanada maamulka Galmudug, oo ay ka socoto qaban-qaabadii ugu dambeysay ee dhismaha maamul cusub oo laga yagleelo deegaanada Galmudug.
War kasoo Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa lagu sheegay in qof aan ka tirsaneyn Ciidamada amniga aysan hub ku dhex qaadan karin Gobolada Mudug iyo Galgaduud oo uu ka arimiyo maamulka Galmudug, iyadoo warka kasoo baxay wasaaradda lagu sheegay in cidii lagu arko laga qaadi doono talaabo waafaqsan Sharciga.
Amarka lagu mamnuucayo guud ahaan qaadashada hubka aan sharciyeysneyn ayaa imaanaya iyadoo maalmihii u dambeyay hey’adaha amaanka Galmudug iyo dowladda federaalka ay deegaanada maamulka Galmudug ka wadeen howlgallo amaanka lagu xaqiijinayo.
Sidoo kale sugidda amaanka waxaa garab socda dadaallo loo diyaar garoobayo doorasho dhawaan ka dhacda Galmudug,taasi oo haatan dadaalkeeda ay wadaan Madaxda Galmudug iyo kuwa dowladda dhexe.
Dhanka kale madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb kula kulamay Saraakiisha Ciidamada Booliska iyo Militariga ee ka howlgala deegaanada maamulkaas, waxuuna ka xog-wareystay arimaha amaanka iyo sida loo qorsheeyay in loo sugo amaanka magaalada Dhuusamareeb oo 17-ka bishan lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada Galmudug.
Sheikh Shaakir ayaa Saraakiisha uu la kulmay waxaa uu faray inay laba jibaaraan sugidda amaanka Ergooyinka ka qeyb galaya Shirka.
← Adam Barre: “maalintii waxaan ahay Kenyaan, habeenkiina Soomaali”
Kenya and Somalia’s maritime border spat risks degenerating →
Dibadbax looga soo horjeedo go’aankii DF oo ka bilowday Kismaayo